छीराएर हेरन ... शायद छिर्दैन होला ... ! - Nepali Sex Tube
छीराएर हेरन … शायद छिर्दैन होला … !
एक दिन बेलुका के काम परेर भाइको कोठामा गाको त……………………..मेरी बास्सै मरी गएं नी । मोरा त आफ्नो यत्रो सामान निकालेर खेलाउंदै रछ । मेरो त मन ढक्क फुलेर आयो । ऐ…………के गरेको यस्तो भन्दै म हत्तनपत्त लाजले बाहिर निस्कें । त्यसलाइ पनि लाज लागेछ क्यार । म निस्कने बितिकै ड्याम्म ढोका बन्द गरो । कोठामा आएर तेसकै बारेमा सोच्दै थे । मोराको सामान त कत्रो रैछ ।
मेरोमा छिराउन पाए पनी हुन्थो जसतो लागो । एकछीन पछी आएर दिदी प्लिज ममिलाइ नभन्दे है भनेर म्याउंम्याउं गर्न थाल्यो । दिदी ममिलाइ नभन्दे है म तैले भनेको जे पनी मान्छू भनेर मेरो हाततिर सुमसुमाउ थालो ।मलाइ माया लागो । मेरो मनले भने फेरी तेलले आफ्नो सामान निकाले पनी हुन्थो जस्तो लागीरहेको थियो । मोरा अनि ढोका नलाइ त्यस्तो गर्छन त ? गाली गरेजस्तो गरेर च्याप्प समाएंर गालामा टोकीदें ।
भन्दीन, जा गएर सूत । भनेर पठाएं । त्यो दीन मेरो मन रातभरीनै चन्चल भो । सबै लुगा खोलें र नांगै सूतें । आफ्नो दूध आफै माडें । ओउँला हालेर हस्तमैथुन गरें । त्यसपछी का दीन त मेरो लागी झन बेचैनीले बीत्न थाले । जहीले पनी भाइ अगाडी आउंथ्यो नजर त्यसको सामानमा पुगी हाल्थ्यो । त्यो पनी मलाई आशलाग्दो नजरले हेर्छ जस्तो लाग्न थाल्यो । के गर्दो रैछ भनेर एक दीन बाथरुममा नुहाउन जांदा मैले बाथरुमको ढोका खुल्लै छाडेर नांगै नुहाउन थालें ।
आज थाह पाएं म नुहाउन थालेपछी त्यो त की होलबाट चीहाएर हेर्दो रहेछ । आज बाथरुम को ढोका खूल्लै थियो त्यसले अलिकती ठेलेपछी त खुली गयो । मैले पनी था नपाए जस्तो गरेर दूध मोलीमोली नुहाएं । योनीतीर हात लांदा यसो कर्के आंखाले हेरेको त त्यो त के गरुँ र कसो गरुँ भा छ रहेछ । गोली ठीक ठाउंमा लाग्यो भनेर मख्ख परें । राती ममी तल भान्सामा गएको बेलामा के गर्दैछ । आज भने जाल हान्नु परो भनेर त्यसको कोठामा गएं । कोठामा त्यो त मोबाइलमा शायद पोर्न भिडियो हेर्दै थियो होला म जाने बितीकै मोबाइल सिराने तीर हालीहालो । जाडोको बेला थीयो ।
“ए के हो खै ” भनेर मैलै मोबाइल खोसें । भरखर हेरेको क्लीप रन थीयो । “पख तं यस्तो राख्छस ममीलाइ आजचैं नभनी कां छाड्छु र” भनेर त्यस को मोबाइल बोकेर हीडेजस्तो गरें । ए पख ममीलाइ भनीस भने मार दीन्छु भनेर झम्टेर आयो । म पनी भागे जस्तो गरें । ऊ मलाइ खेद्दै आएर च्याप मेरो हात समातेर मोबाइल खोस्न थाल्दा मैले जानीजानी दूधले उस को जीउमा धक्का दीएं । अघी देखीनै मोबाइलमा ब्लु फील्म हेरीरहेको उसको उत्तेजना म अझै बढाउन चाहन्थें ।
खाना खाएर यसो सोचें बुढियाले हाम्रो खेल था पाईन भने त मार्छीन । अनी मैले बुबाको ‌ओषधीको प्याकेटमा हेरे स्लीपीङ ट्याबलेट रछ । अनपढ बुडियालाइ के था । अनी ममिको कोठामा गएं ।
ममि सुतीस्यो । छैन हेर न कस्तो टाउको दुखीराछ थीच्देन । ममिले भन्नुभयो ।
एकछीन सीरीयल हेरें ।
रुपेश आयो । मैले आंखा सन्काएं । अनी हामी दुबै जना रुपेशको कोठामा गयौं । ए रुपेश तेरो सामान भनेपछी उसले जिन्स पाइन्टको चेन खोलेर रनक्क रीसाएको सामान झीको । मैले पूरै पेन्ट खोल्न भनेपछी उसले खोल्यो मैले उसको सामान मुखमा हालेर मुख मैथुन गर्न थालें ।
भाउजुलाई चिक्दाको मजा